सोमवार, पुष २१, २०७६
स्थायी राजधानी र नामाकरण टुङ्ग्याइँदै
प्रदेश नम्बर ३ को हिउँदे अधिवेशन आज (सोमबार)बाट सुरु हुँदैछ । गत भदौ २५ गते वर्षे अधिवेशन सकिएसँगै स्थगित भएको प्रदेशसभा चार महिनापश्चात आज आह्वान गरिएको हो । यस अधिवेशनबाट स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुङ्गो लगाइनेछ । लामो समयदेखि अन्यौलमा रहँदै आएको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुङ्गो लगाउनेबारे अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीमा योग्यता र क्षमताका आधारमा कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । पुष्पलाल मञ्च नेपालद्वारा आइतबार धनगढीमा आयोजित ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन, सङ्घीयता र समृद्धि’ विषयको कार्यक्रममा उहाँले पार्टी्भित्र गुटउपगुट बनाई कार्यकर्तालाई हेप्ने र पछाडि पार्ने प्रवृत्ति देखिएको तथा योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिमाथि अपमान भइरहेको बताए ।
कांग्रेसले छान्यो राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेदवार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियससभाको आशन्न निर्वाचनका लागि आफ्ना उम्मेदवार टुङ्गो लगाएको छ । निर्वाचन आगामी माघ ९ गते हुँदैछ । पार्टीले प्रदेश नं १ बाट नीरबहादुर विश्वकर्मा (पाँचथर) दलित, मिना पुलामी मगर (सुनसरी) महिला, राजेन्द्र घिमिरे (झापा) अन्य, प्रदेश नं २ बाट नगिना यादव (महोत्तरी) महिला, भोला पञ्जियार (धनुषा) अल्पसङ्ख्यक÷अपाङ्गता, प्रदेश नं ३ बाट हरिशरण श्रेष्ठ (सिन्धुपाल्चोक) अन्य, छलीकुमारी शर्मा उपाध्याय (चितवन) लाई उम्मेदवार चयन गरेको हो ।
‘सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान हुन्छ’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल–भारतबीचका सीमा समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव माथि उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै समस्यालाई उनले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
बिहिवार, पुष १७, २०७६
पाँच संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा पेश
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा पाँच संवैधानिक आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लोकसेवा आयोगको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७५-०७६, थारु आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग र मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५-०७६ सभामा पेश गरे ।
महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ : देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताहरूकै मागअनुसार महाधिवेशनको मिति तोकेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै देउवाले पौडेल समूहतर्फ लक्षित गर्दै भने, “उहाँहरूकै मागअनुसार मैले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट बहुमतबाट महाधिवेशन मिति तोकेको हुँ ।”
प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार अपराह्न १ बजेका लागि निर्धारित बैठक सूचना टाँस गरी स्थगन भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा मंगलबार प्रकाशित लिखित सूचनामा बुधबारका लागि पूर्वनिर्धारित बैठक विशेष कारणवश बस्न नसक्ने उल्लेख गरिएकोे छ । सभामुख चयनलगायत विषय दलहरुबीच व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले बैठक स्थगन भएको बुझिएको छ । यसअघि पनि यही पुस ११ गते सूचना टाँस गरी बैठक स्थगन गरिएको थियो ।
राजधानीको अन्योल हटेसँगै प्रदेशसभा आह्वान
राजधानी र नामाकरणको विवादले करिब चार महिनादेखि रोकिएको प्रदेश–३ को प्रदेशसभा बैठक पुस २१ गते आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २१ गते बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘मधेशमा फेरि ठूलो आन्दोलन हुन्छ’
समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशमा पुनः ठूलो आन्दोलन हुने बताएका छन् । युवा सङ्घ महोत्तरीको जिल्ला सम्मेलनलाई जलेश्वरमा सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकार आफ्नो पार्टीसँग गरेको सम्झौतामा धोका दिएको तथा मधेश र मधेशीको हकअधिकार दिन आनाकानी गरेको हुँदा आफ्नो हक र अधिकार प्राप्तिका लागि मधेशमा पुनः ठूलो आन्दोलन गर्ने बताए ।
‘पैसामा लट्ठिएर एमसीसी स्वीकार गर्दैनौं’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहायता कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने अडान दोहो¥याएका छन् । एमसीसीको परियोजना स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे नेकपा र सरकारबीच बहस कायमै रहेको बेला नेता नेपालले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजीको अंग भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्नु असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हुने दाबी गरे ।
सूचना प्रविधि विधेयक पारित हुन दिँदैनौं : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिबाट पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयक संसदबाट पारित हुन नदिने बताएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विधेयक यही रुपमा पारित गर्न खोजिए सडक संघर्षमा जान पनि कांग्रेस तयार रहेको बताए ।
‘महाधिवेशनको मिति सहमतिका आधारमा तोकिनुपर्छ’
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सहमतिका आधारमा महाधिवेशनको मिति तोकिनुपर्ने बताएका छन् । बहुमतको आधारमा महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको बताउँदै कोइरालाले भने, “त्यसलाई सच्याएर सहमतिको आधारमा महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ । जसले पार्टीभित्रको विवादलाई साम्य पार्दछ ।”
माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति तथा अभिभावक संघर्ष समितिले निजी मेडिकल कलेजहरुले अहिलेसम्म पनि बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी रहने चेतावनी समेत दिएका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएको छ । समितिले आन्दोलनका रूप परिवर्तन हुने तर संघर्ष तथा आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएको छ । कार्यक्रममा संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले आफूहरुले आन्दोलन तथा संघर्ष सुरु गरेको चार महिना बितिसक्दापनि सरकारले अहिलेसम्म माग पूरा गराउनको लागि प्रभावकारी कदम नचालेको गुनासो पोखे ।
प्रदेश–३ को नाम बागमती हुने, स्थायी राजधानी हेटौंडा
प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा नै कायम हुने निश्चित भएको छ । प्रदेशको नाम भने बागमती राखिनेछ । प्रदेशमा दुईतिहाई मत रहेकोे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुङ्गो लगाएको हो । सचिवालयको निर्णय पार्टी प्रदेश समिति हुँदै प्रदेश संसदीय दलमा सिफारिस हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान आगामी माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा केन्द्रित गरेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति तयारीका काम तीव्ररुपमा अघि बढिरहेको र आयोगको सम्पूर्ण ध्यान अहिले उक्त निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको आयोगका सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।